पौराणिक कथा : बाहुन, ठग तथा बोका - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← गीत : गोरेटो अनि उस्तै छ गल्ली
डोटेली गीत : माइत नइत हेरे मुख →
कुनै नगरमा मित्र शर्मा नाम गरेका एकजना अग्निहोत्री बाहुन बस्दथिए । माघको महिनामा अत्यन्त शीतल बतास चलिरहेको थियो । वातावरण कुइरोले डम्म ढाकेको थियो । आकाशमा बादल लागेको तथा फुस्स फुस्स पानी परिरहेको थियो । मौसम जाडोको कारण कष्टकर भएको हुनाले उनी कुनै गाउँमा गएर कुनै जजमानसित पशुको लागि याचना गर्दै भने,“जजमान, आउने औंसीको दिन मैले यज्ञ गर्नुछ । अत: मलाई एउटा पशु दान गर ।” बाहुनको याचना सुनेर एउटा दयालु जजमानले बाहुनलाई एउटा ह्ष्टपुष्ट तथा मोटो बोका दिए । मोटोघाटो भएको हुनाले त्यो बोका हिंड्नमा असमर्थ थियो । लौरोले हाँक्न थालेपछि त बोका सोझो बाटो नहिंडेर यताउति गरेर पो हिंड्न थाल्यो । बोकाको यस्तो चाला देखेर बाहुनले हिंड्न सजिलो होस् भन्नाका खातिर बोकालाई उचालेर पिठयूमा बोकी घर जानलाई छिट्छिटो हिंड्न थाले । बाहुनलाई खाइलाग्दो बोकालाई पिठ्यूमा बोकेर हतारहतार हिंड्दै लगिरहेको तीनजना धूर्त ठगहरूले देखे । बोकालाई देखेर यस बोकालाई काटी पोलेर मासु खाइ जाडो छल्ने निधो गरे । अब बाहुनलाई ठगी कुन प्रकारले बोका हात पार्ने भन्नेबारे तीनैजनाले आपसमा सल्लाह गर्न थाले । सल्लाहअनुसार तीनजना ठगहरू बाहुन हिंड्दै गरेको बाटोमा एक/एक कोसको दूरीमा उभिएर बाहुनलाई ढुकेर बसे ।
दुई कोस पर गएपछि अर्को ठग बाहुनको अघिल्तिर आएर हात जोड्दै भन्यो,“बाहुन बाजे, नमस्कार छ । छि: छि: तपाईंले यो मरेको गधाको बच्चालाई किन बोकी हिंड्नुभएको हो कुन्नि । तपाईं जस्तो बाहुनले यस्तो अपवित्र लाश बोकेर हिंड्न ठीक भएन है । फालिदिनुस् यसलाई तथा नुहाएर चोखिनुस् ।” त्यसको कुरा सुनेर बाहुनले रिसाएर भने,“तिमी अन्धो छौं कि क्या हो ? मैले बोकालाई बोकेको देखेनौं ?” बाहुन रिसाएको देखेर सो ठगले भन्यो,“रिसानी माफ होस् बाहुन बाजे । मैले तपाईंले जे बोकेको देखें सोही भनें । यसमा किन रिसाउने ? तपाईंको जो मर्जी, जे मन लाग्दछ त्यही गर्नुहोस् । मैले बित्थामा भनिदिएँ । म आफ्नो बाटो लाग्छु, ल १” यति भनेर ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो । बाहुन आफ्नो बाटो हिंड्न थाले ।